June 15, 2020 1295
छोरालाई उभिएर र छोरीलाई बसेर पिसा’ब फेर्न सिकाइन्छ । तर अब धेरै देशका स्वास्थ्य विभागले व्यापक रुपमा फै’लिएको यो स्वभाविक धारणाको विषयमा’थि प्रश्न उठाइरहेका छन् । पुरुषले कसरी पि’साब फे’र्नुपर्छ ?
यो प्रश्न थुप्रै पटक स्वास्थ्य र सर–सफाईको दृष्टिकोणले पनि सोधिन्छ तर कतिका लागि यो स’मान अधिका’रको मामला पनि हो ।
त्यसो भए पुरुषका लागि कुन तरिका सही हो ? धेरैजसो पुरुषका लागि उभिएर पिसा’ब फेर्नुभन्दा सजि’लो अरु केही हुन सक्दैन ।
उभिएर पिसा’ब फेर्ने प्रक्रिया निकै छिटो हुन्छ र यो एक किसिमले व्यावहारिक तरिका पनि हो । के तपाईंले कहिले पुरुष:को सार्वजनिक शौचालय बाहिर लामो लाइन देख्नु’भएको छ ?
वास्तवमा सायदै तपाईंले कहिले कुनै लाइन देख्नु’भएको होला । पुरुष भित्र जान्छन् र निकै छोटो समयमा नै बाहिर निस्किहाल्छन् । तुरुन्त गर्न सकिने यो प्रक्रिया पछा’डि दुई कारण छन्ः
– पुरुषले तुरुन्त पिसा’ब फे’र्न सक्छन् किन’भने उनीहरुले कम्मर मुनीका सबै कपडा फुका’ल्नु पर्दैन ।
– किनभने पुरुषको युरिनल्स क्यूबिकल्स तुलनात्मक रुपमा सानो स्थानमा पनि राख्न सकिन्छ । त्यसकारण युरिनल्स राखिएको सानो ठाउँमा पनि धेरै पुरुषले पिसा’ब फे’र्न सक्छन् ।
तर थुप्रै विशेष’ज्ञका अनुसार पिसाब फेर्ने समयमा तपाईंको शरीरको स्थिती कस्तो छ, त्यसले पिसा’बको मात्रा’लाई प्रभावित गर्छ ।
पि’साब फेर्नु पछाडिको विज्ञानः
पिसा’ब ब्ल्याडर अर्थात् एउटा थैलीमा जम्मा हुन्छ । त्यसै’कारण हामी पटकपटक शौ’चालय जानबाट बच्छौं, राती आरामपूर्वक सुत्न पाउँछौं र दिउँसो काम गर्न सक्छौं ।साधारणतया ब्ल्याड’रमा ३ सय ६ सय मिलिलिटर पिसा’ब जम्मा हुन’सक्छ । तर जब यो दुई तिहाई भरिन्छ तब हामीलाई पि’साब फेर्न मनलाग्छ ।
ब्ल्याडरलाई पूर्ण रुपमा खाली गर्नका लागि हाम्रो स्नायू प्रणाली पूर्ण रुपमा ठिक हुनुपर्छ । किन’भने यही प्रणालीले हामीलाई कहिले शौचालय जाने र वरिपरि कतै स्थान नभए कहि’लेसम्म र कति पिसाब रोक्न सकिन्छ भनेर जान’कारी दिन्छ ।
एक स्वस्थ्य व्यक्तिले पिसा’ब फे’र्नका लागि ब’ल लगाउनुपर्दैन । तर थुप्रै पटक पुरुषको यस्तो स्थायी वा अस्था’यी स्थिती पैदा हुन्छ जसका कारण उनीहरुलाई पिसाब फेर्न मुश्कि’ल हुन्छ ।
प्लस वन नामको एक साइन्टिफिक पब्लिकेशनको एक अध्ययनका अनुसार जुन पु’रुषको प्रो’स्टेट सु’न्निएको छ र यसले स’मस्या निम्त्याइरहेको छ, उनीहरुले बसेर पिसाब फेर्दा राम्रो हुन्छ ।
यो अध्ययनमा स्वस्थ पुरुष र लोअर युरिनरी ट्र्याक्ट सिम्टमम्स (एलयूटिएस) सँग जुधिरहेका पुरुषबीच तुलना गरिएको थियो । एलयूटिएसलाई प्रोस्टेट सिन्ड्रोम पनि भनिन्छ ।
अध्ययनमा पाइए अनुसार एलयूटिएससँग जुधिरहेका पुरुषले यदि बसेर पिसाब फेर्छन् भने उनीहरुको यूरेथ्रल एरियाबाट दबा’ब कम हुने गर्छ । यसका कारण उनीहरुको पि’साब फे’र्ने प्रक्रिया सहज र संक्षिप्त हुने गर्छ ।
तर स्वस्थ पुरुषमा उभिएर र बसेर पिसा’ब फे’र्नुमा कुनै अन्तर देखिँदैन । ब्रिटेनमा नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) ले पि’साब फेर्न सम’स्या हुनेहरुलाई यसका लागि कुनै राम्रो स्थानमा आरा’मसँग बस्न सुझाव दिन्छ ।
तपाईंले सुन्नुभएको होला कि बसेर पि’साब फेर्दा प्रो*स्टेट क्या*न्सर हुँदैन र पुरुषको यौ*न जीवन’ उत्कृष्ट हुने गर्छ ।तर यो कुरामा कुनै वास्तविकता छैन किनभने यसमा केही प्र’माण छैनन् न नै केही अध्ययन उपलब्ध छन् ।
पुरुषले उभिएर पि’साब फेर्दा त्यो यता’उता फैलने ख’तरा हुन्छ जुन स्वच्छताको हिसाबले ठिक मानिँदैन ।जुन शौचालयलाई अन्य व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्छन्, त्यहाँ पिसा’ब जताततै फै’लनु भनको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि खराब हो । त्यसकारण अब पुरु’षले पनि बसेर नै पिसा’ब फेर्नुपर्ने कुरामा जो’ड दिन थालिएको छ ।
सन् २०१२ मा स्विडेनमा यसको सुरुवात भएको देखिएको छ । त्यहाँका एक स्थानीय राजनेता आफ्नो इलाका’को सार्व’जनिक शौचालयको स्थिती देखेर यति विचलित भए कि उनले पुरुषलाई अरुको सुविधाको पनि ख्याल गरिदिन प्रेरित गर्ने रचना’त्मक तरिका खोज्न सुरु गरे ।
मानिसहरुले सर–सफाइ र स्वच्छतामा ध्यान दिउन् भन्ने उनी चाहन्थे । सार्वजनिक शौचालयमा जान कसै’लाई पनि फाहोर स्थानमा गएको जस्तो महसुस नहोस् भन्ने उनको चाहना थियो । यहाँबाट एउटा बहसको सुरुवात भयो र अब थुप्रै युरोपेली देश–जस्तै जर्मनीमा सार्व’जनिक शौचालयमा पुरुषले उभिएर पि’साब फे’र्न सक्दैनन् ।
केही शौचालयमा ट्राफिक संकेतजस्तै उभि’एर पिसाब फेर्न मनाही छ भन्ने पोस्टर टाँसिएका हुन्छन् । तर जो पुरुषले बसेर पि’साब फे’र्छन्, उनीहरुलाई त्यहाँ ‘सिट्जपिंकलर’ भनिन्छ । यसको अर्थ उभिएर पिसा’ब फे’र्नु भनेको पुरुषार्थी व्यवहार होइन ।
मानिसहरुले त आफ्नो घरमा नै यस्तो संकेत लगाउन सुरु गरेका छन् जसमा पुरुष पाहुनालाई बसेर पि’साब फेरिदिन आग्रह गरिन्छ । – हिमालय दैनिक
Prevयी युवतीको ‘हट बेली डान्स’ एकाएक बन्यो भाइरल (भिडियो हेर्नुहोस)
Nextएक्लो छोरालाई अन्ति’म बिदाई गर्न बिहारबाट मुम्बई आए सुशान्तका बुबा… हेर्नुहोस्
कान्छी श्रीमती ल्याएर जेठी श्रीमती ढोग्न लगाउँदा भयो हाना`हान (हेर्नु`होस भिडियो)
बाबु-आमाको मृ:त्यु भएको ४ वर्षपछि बच्चाको जन्म
घटेनन् संक्रमित, आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस्
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (81524)